Fihantsiana Ireo Mpanao Sivana Tranonkala : ‘Manompo’ Sahobakaka Ny Shinoa Ho Fanamarihana Ny Faha-90-Taona Nahaterahan’ny Mpitondra Fanjakana Teo Aloha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Aogositra 2016 9:52 GMT
Ohatra, nanoratra tao amin'ny sehatra media sosialy malaza Weibo ny tonian-dahatsoratry ny sehatra fampitam-baovao Fenghuang, “Miarahaba antsika, Fenghuang ihany ity: Androany no faha-90 taonan'ny zokiolona, aoka isika hifoha maraina mba hanokana iray segondra ho azy.” Niaraka tamin'ny sarinà môtô manana endrika mitovitovy amin'ny sahobakaka ny hafatra.
Nanomboka tamin'ny 2011 ny kolontsaina fanompoana sahobakaka, rehefa nanomboka niely an-tserasera ny tsaho fahafatesan'i Jiang . Nisy tsaho fahafatesana toy izany koa nipoitra saika isan-taona nanomboka tamin'izay. Nisy mihitsy aza olona nanangana andian-dahatsary 41 tao amin'ny YouTube mitondra ny lohateny hoe ” Nampiako iray segondra ny ain'ny Filoha Sahobakaka. Hendratrendratra! ” Manana ny niaviany ihany koa ho valin ‘ilay tsaho momba ilay fahafatesana tamin'ny taona 2011 ilay teny hoe” manampy iray segondra “, na” + 1s “, izay midika hoe manampy segondra iray hafa ho fahaveloman'i Jiang .
Tamin'ny 2014, lasa miharihary kokoa ny lamaodin'ny fanompoana sahobakaka noho ny kaonty ho an'ny daholobe WeChat malaza antsoina hoe “Semineran'ny asa soratr'i Jiang voafantina” (江 选 研讨会). Nanoratra ny fotoana niainan'i Jiang tamin'ny endrika fanompoana sahobakaka ilay kaonty ho an'ny daholobe. Ohatra : “Firy ny teny vahiny hain'ny zokiolona?”; “Ny tantaram-pitiavan'ny zokiolona niaraka tamin'ny vadiny”; “Amboninareo ilay mpanangom-baovao Amerikana Wallace “; “Tahaka ny ahoana ny ny halakin'ny hazakazak'ilay mpanangom-baovao ao Hong Kong?”
Nanao resaka ara-politika momba ilay kolontsaina lamaody tao amin'ny Twitter i Murong Xuecun, mpanoratra mahaleotena monina ao Beijing sy Hong Kong:
Na dia teo aza ny fandraràna, tsy nahatana fihomehezana ireo mpankafy sahobakaka mafana fo. Raha ny marina, fotoana tsy fahita firy ny faha-90 taona nahaterahan'ny sahobakaka, indrindra, angamba tena tsy fahita firy toy ny rahona miendrika sahobakaka heverina ho hita alohan'ilay andro manokana: